एकै पटक आमा र २ छोराछोरीले किन गरे झुन्डिएर आत्महत्या ? | My News Nepal
एकै पटक आमा र २ छोराछोरीले किन गरे झुन्डिएर आत्महत्या ?
चितवन । चितवनमा एकै परिवारका तीन जनाले झुण्डिएर आत्महत्या गरेका छन् । भरतपुर महानगरपालिका–१८ शशीनगरस्थित शहरी क्लिनिक टोलमा एकै परिवारका ३ जना झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेको हो ।
चितवन प्रहरीका अनुसार एउटै परिवारका आमा, छोरा र छोरी एकै स्थानमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेका हुन् । घरभित्र एकै स्थानमा तीनै जनाले सलको पासोमा आमा माया आलेमगर, छोरी विनिता मगर र छोरा विवेक मगरले झुण्डिएर आत्महत्या गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, चितवनले जानकारी दिएको छ ।
प्रहरी अनुसार मृतकहरु आमा ४० वर्ष भन्दा कम उमेरको र छोरा छोरी १५ वर्ष भन्दा कम उमेरको रहेका छन् । मृतकका श्रीमान् नरबहादुर आलेमगर नेपाली आर्मीमा काठमाडौंमा कार्यरत रहेका छन् । उनीहरूको हत्या या आत्महत्या के हो भन्ने खुलेको छैन ।
स्थानीयवासीले भने आमाले नै छोराछोरीलाई झुण्ड्याएर आफूले पनि झुण्डिएर आत्महत्या गरेको हुनसक्ने आशंका गरेका छन् । उनीहरुको शव अहिले परीक्षणका लागि भरतपुर अस्पताल ल्याउने तयारी गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।